Semalt - Nzira Yokudzivirira Sei Bhizimisi Kubva CryptoLocker Malware Attack?
Vanotsvaga nevanopikisa vave vachigadzira matanho anokosha mumashandisirwo avo ekushanda sezviitiko uye zvitsva zvinoramba zvichishandiswa muSeO. Nzira uye zvishandisi zvakashandiswa kare kudzivirira malware kubva pakurwisa mawebhusayithi uye mabhizimusi epaIndaneti asiri kushanda. Iyo virus yeGritain yava imwe yemarware inopararira mumawebsite evashandisi vekupedzisira.
Andrew Dyhan, Mutengi Wekugutsikana Kwevatereji Semalt , anotarisa pfungwa dzakanaka dzokuti ungachengeteka sei kune malware.
Zviitiko zvakawanda zvakaiswa mberi kuchengetedza vashandi vekushandisa pakombiyuta kubva mukurwiswa, nekuve vakangwara pavanoshandisa inhare yevanhu uye pakutsvaga purogiramu yepaIndaneti isina rusununguko ichikurudzirwa - small business computer experts. Kuti urege kudzivirirwa nemushushi ane utsinye, kutora uye kuisa premium anti-malware chinhu chinodiwa zvakakosha. Free anti-viruses inowanikwa nyore nyore paIndaneti, asi software ye premium inowanikwa nezvimwe zvinobatsira kana ichienzaniswa nehuwandu hwepurogiramu uye yepamusoro purogiramu.
Ransomware, iro rinozivikanwawo se CryptoLocker, rave richikanganisa mabhizinesi akawanda eIndaneti iye zvino, mamiriro ezvinhu akange ari kutumira mafemu akawanda kuti aite ngozi. CryptoLocker virus inofungidzirwa senzira ye malware yakave iri kupararira mumakombiyuta ekupedzisira vanoshandisa nzira dzekuchengetedza zvinyararire pasina kubvumirwa kwavo.
Sei chirwere che CryptoLocker chakasiyana nevamwe?
Kuva nehutachiona kubva kuTransm family, Ransomware inoshandiswa kupararira muPC yako nekuputsa tsika yako yekuchengetedza nhamba. Pashure pokunge waiswa mu computer yako, CryptoLocker inobvumira kuiswa kweimwe mhando dze malware yakafanana neTrojan virus..CryptoLocker imwe yemhando sezvo inoda mari yakawanda yemadhora mushure mekutora zvizere zvePC yako.
VaHackers vanosarudza nguva yekudzorera ruzivo rwako rwekuvanzika uye zviyeuchidzo mushure mokuisa iyo malware paPC yako. Kakawanda, vanopikisa vanodzorera ruzivo rwekadhi rako rechikwereti uye account account passwords kwauri kana apedza kubhadhara mari yaunoda.
Nzira yekudzivirira sei CryptoLocker virus kubva kune webhusaiti yako
Nhamba dzinoratidza kuti mamwe mabhizinesi anobuda kunze kwebhizimisi sechikonzero chekunyengedzwa uye kushandisa mari yakawanda yekubhadhara hackers. Securence, kambani yepamusoro-yekuchengetedzwa kwekambani, yakange iri mberi yekurwisana nevanotengesa uye malware inopararira kune mabhizimusi webusaiti kuburikidza nekupa mhinduro dzepamusoro. Securence kambani inopa webhutete yekuchengetedza mhinduro kuburikidza nekutsvaga spam emails uye kushandisa shanduro dzekupedzisira dze malware uye zvishandiso zvekudzivirira malware kuti irege kukukanganisa.
Securence kambani inoshandawo kuve nechokwadi chekuti IP mazita ekukutumira maimeri akachengeteka uye achishandisa shanduro yepamusoro yehutoriki iyo inoronga nguva chaiyo-nguva yekuona kutyisidzika uye malware. Maererano neSecurence professionals, vatengesi vanogona kuwana vashandi vePC vachishandisa mafaira akachengetedzwa. Mafaira ekuchengetwa anowanzoshandiswa kuparadzira CryptoLocker mumawebsite uye masangano masangano.
Sei uchizvidzivirira kubva kuna CryptoLocker?
Kuchengetedzwa kwako paIndaneti kunokosha zvikuru. Maitiro akawanda akashandurwa nekuda kwekugadzirisa nekugadzirisa semagumisiro evanoedza. Kurwiswa kwezvinorayiridzi kwave kuri kutungamirira kushizha rebhizimisi semugumisiro wekutambura nekurasika gore roga roga. Kurwiswa kwezvinonyadzisira kunoratidzika kuuraya kana kuchienzaniswa neTransfer virus nekurwisa mafambiro. Chinhu chakanaka ndechokuti, vadzidzisi uye vadzidzisi veTI vane nyaya iripo sezvo ivo vari kuve vachivandudza shanduro itsva dzezvinorwisa-malware kuchengetedza mabhizimisi kubva mukurasikirwa.
Kuti urege kudzivirirwa nevanovhiringidza, iwe unofanirwa kushandura mapurogiramu emazuva ano e-software uye CryptoLocker Anti-malware kuti udzivise zvirongwa zvehutachiona kubva pane zvaunoshandisa mabhizinesi ako. Iwe haufaniri kutambura kurasikirwa kusingagumi gore negore. Tora vashandi kuti vaite rako rekuchengetedzwa kwewebsite uye kubvisa malware uye mavairasi kubva pane zvekutengeserana kwebhizimisi rako.